Sida loo nadiifiyo Xbox One console iyada oo aan waxyeello loo geysan - VidaBytes | LifeBytes
Shabakadaha Shabakadda | | Tiknoolaji
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan lahaanshaha Xbox waa nadiifinta iyo shaqaynta, gaar ahaan si looga fogaado waxyeelo gudaha ah oo ka timaadda boorka. Halkan waxaan ku bari doonaa sida loo nadiifiyo Xbox One:
Si aad u nadiifiso bannaanka Xbox One, isticmaal maro microfiber si aad uga saarto faraha, wasakhda, ama wasakhda kale. Tani waa inay sidoo kale ka saartaa boodhka inta badan ku urursan aaladaha elektiroonigga ah, gaar ahaan kuwa lagu kaydiyo armaajooyinka ama meelaha telefishanka hoostooda.
Ka sokow muuqaalka kore, waxaa laga yaabaa inaad ogaato in taageere -hayahaagu uu sameeyo buuq badan saacado badan oo la isticmaalo ka dib. Dadka qaarkood, qaliinkan buuqa badan wuxuu xitaa ku keenaa ciyaar -gaabis ama arrimo kale.
Si aad tan u saxdo, isticmaal daasad hawo cadaadis leh si aad boorka uga saarto. Hubi inaad ka furto qalabkaaga ka hor intaadan bilaabin wax nadiifin ah si aad uga fogaato waxyeelo ama dhaawac kale.
Microsoft kuma talineyso inaad isku daydo inaad furto qalabka ciyaarta waxayna kugu boorinaysaa inaad caawimaad xirfad u raadisid wixii dayactir gudaha ah. Si ka duwan sida Xbox 360, Xbox One ma laha wejiga wejiga laga saari karo. Microsoft ayaa sidoo kale ka digtay adeegsiga nooc kasta oo nadiifiyaha dareeraha ah, maadaama xitaa isticmaalka taxaddar leh ay u horseedi karto dhaawaca qoyaanka nidaamka hawo -mareenka.
Talooyin ku saabsan sida loo nadiifiyo Xbox One
Waa tan sida loo nadiifiyo Xbox One -kaaga, oo ay la socdaan sahayda aad u baahan tahay inaad samayso.
Ka saar Xbox One -kaaga.
Ku billow adigoo isticmaalaya maro microfiber ah si loo nadiifiyo bannaanka oo dhan. Kuwani inta badan waa isla muraayadaha muraayadaha loo isticmaalo muraayadaha. Noocyada kale ee nadiifinta waxaa loogu yeeraa maryaha boorka.
Isticmaal maro si aad si taxaddar leh u nadiifiso bannaanka konsole, oo ay ku jiraan dusha, hoose, hore, gadaal, iyo dhinacyada aaladda. Nadiifinta joogtada ahi waxay ka hortagi doontaa in boodh badani is urursadaan, taas oo laga yaabo inay u baahato dhawr maro si ay si fiican u nadiifiso aaladdaada. Isticmaal dhaqdhaqaaqyo wareeg ah si aad ugu xoqdo farahaaga ama uur -ku -taaga qaybaha caagga ah ee aaladdaada, oo ay ku jiraan hore iyo sare.
Ka dib markaad nadiifiso dusha Xbox One -kaaga, Isticmaal qasac hawo cadaadis leh si aad si taxaddar leh uga saarto wixii boodh ah ee ku soo kordhaya gudaha dekedaha. Daasadahaan waxaa lagu iibsan karaa noocyo jaban ama ka qaalisan.
Iyadoo aan loo eegin nooca aad isticmaashoAdeegso qarxyo gaagaaban si aad uga saarto dhismayaasha dekadaha dambe iyo meelaha hawo-mareenkaaga. Hubi inaad qalabka ka furtay ka hor intaadan nadiifin dekadaha dambe.
Mar kale dusha mar kale maro si aad uga saarto boodh ku dul degtay qalabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Sida loo nadiifiyo qalabkaaga Xbox One adiga oo aan waxyeello u geysan
PS4 console-kii labaad ee ugu iibinta badnaa abid
Maxaa sameeya Smart TV